. * . * . ကွယျတစငျး . * . * .: August 2012
ရေးသားသူ မိုးခါး at 8/15/2012 10:54:00 PM2comments:
ဖြတ်သွားဖြတ်လာ လမ်းမတန်းတွေပေါ် အတွေးတွေနဲ့ ခြေရာကောက်ကြည့်မိတော့ ဟိုးဟိုအတိတ်ဆိုတာကို ပြန်လွမ်းမိသလိုလို .. တချို့တွေလည်း မပြောင်းမလဲ .. တချို့တလေကျ မှတ်မိဖို့တောင် ခပ်ခက်ခက် .. အချိန်ရဲ့ ရေအလျင်မှာ စီးမြော အဆုံးသတ် ပင်လယ်ဆီ မရောက်သရွေ့ပေါ့ .. တကွေ့ နှစ်ကွေ့ .. ကွေ့ပေါင်းများစွာ အချိုးအဆက်တွေမှာ ဟန်ချက်ညီညီ စီးဆင်းရင်း တခါတလေလည်း တလူးလူး တလိမ့်လိမ့် .. တချို့အရာတွေကို သယ်ဆောင် တချို့ကို ချန်ရစ် ဘ၀ရဲ့ လမ်းခရီးပါပဲ .. ဟုတ်ပါတယ်လေ .. ဒါပဲ လူတွေပြောပြောနေတဲ့ စာလုံး၂လုံးနဲ့ ဘ၀ဆိုတာပဲ ဖြစ်ပါလိမ့်မယ် ..
မေ့ထားလို့ ဖြစ်ပေမယ့် တိုက်ဆိုင်ချိန်ကျ သတိရတတ်မြဲ တဲ့ .. ဟုတ်ပါရဲ့ .. တမင်တော့ အဲဒီကုန်လွန်ခဲ့တဲ့ အချိန်တွေကို မလွမ်းဆွတ်နေမိပါဘူး .. အင်းးး တခါတလေပေါ့ .. တချို့က ရယ်မဲ့မဲ့နဲ့ပါလား .. သြော် .. တချိန်က ကိုယ်တိုင်လည်း ဒီလိုပဲ ရယ်ပွဲဖွဲ့ခဲ့ဘူးသားရယ် .. ရယ်ကြပါစေလေ .. တချိန်ချိန်တော့ အတိတ်ကို လွမ်းဆွတ်ခြင်းဆိုတဲ့အရသာကို ခုရယ်နေသူတွေ ခုံခုံမင်မင် ခံစားလိမ့်ဦးမယ် .. အဲ့ဒီအချိန် တစုံတယောက်က ခပ်ပြုံးပြုံး လှောင်လိမ့်ဦးမယ်လေ .. ဒါထင်ပါရဲ့ လည်နိုင်လွန်းတဲ့ ၀ဋ်ဆိုတာလား .. မယုံမရှိပါနဲ့ .. လွမ်းဆွတ်ရတဲ့ အရသာက ခါးမြိန်မြိန်လေးရယ် ..
လွမ်းကြည့်ပါလား .. နေ့အခါမှာ အေးမြတဲ့ လမင်းကို လွမ်း .. ညအခါမှာ ပူပြင်းပြီး အလင်းပေးတဲ့ နေမင်းကို လွမ်း .. ကြယ်မရှိတဲ့ညမှာ ရေတွက်စရာ ကြယ်ဖြူလေးတွေကို လွမ်း .. လကွယ်ညကျ ၀ိုင်းစက်နေတဲ့ လပြည့်ညကို လွမ်း .. တပါးပြည်ရောက်နေချိန် ကိုယ့်မွေးရပ်မြေကို လွမ်း .. ကိုယ့်မွေးရပ် ရောက်ချိန် သွားဖူးခဲ့တဲ့နေရာတွေကို လွမ်း .. နွေမှာ နှင်းကို လွမ်း .. မိုးတွင်း ပူရှရှ အရသာကို လွမ်း .. ဆောင်းရောက်ရင်ဖြင့် မိုးပေါက်လေးတွေကို လွမ်းပေါ့ .. အိုး ကျမ ကမ္ဘာလေးမှာ လွမ်းစရာတွေ တယ်များလွန်းလှတယ် .. ဒါတောင်လေ ကျမ သက်ရှိတွေကို ထိန်ချန်ထားသေးတာ ..
ဒါ နင် သိပ်အားနေလို့ လျှောက်လွမ်းနေတာ တဲ့လား .. အဟက် .. မသိပဲနဲ့ .. ကျမက လွမ်းဖို့ဆို မအားတဲ့ကြားက အချိန်ပေး လွမ်းတတ်သေးတာ .. မလွမ်းဘူးသေးရင် လွမ်းကြည့် .. တခုတော့ ပြောလိုက်မယ် .. မယုံမရှိနဲ့ အဲဒီ အလွမ်းနာက စွဲတယ် ..
တခါတလေ အလွမ်းက အုံ့မှိုင်းမှိုင်း ပြိုတော့မယ့် မိုးလို .. တခါတလေ တောက်တောက်ပပ အာရုဏ်ဦး အလင်းလို .. ဟော တခါတခါကျ အလွမ်းက ရင်ထဲ အေးမြလို့ ဆောင်းတွင်းဘက် မနက်ခင်းလို .. ပြောလိုက်မှ လွမ်းခဲ့ဘူးတာတွေစဉ်းစားမိနေပြီဟုတ် .. အလွမ်းတွေက အရောင်စုံတယ်နော် ..
သြော် .. တခါတလေလည်း သတိတရားတွေကို ဘေးချ .. သဲသဲမဲမဲကြီး လွမ်းဆွတ်ပစ်လိုက်တော့ ဘ၀ရဲ့ အတိတ်ပြကွက်တွေ တကွက်ပြီး တကွက် .. တကွက် .. တကွက် နဲ့ .. ကျမရဲ့ ပစ္စုပ္ပန်တွေကို အတိတ် အနာဂတ်နဲ့ ချိတ်ဆက်သွယ်တန်းလိုက်တော့ အချိန်နာရီတွေ နုပျိုလန်းဆန်းသွားရတယ် ..
ခုချိန်ထိလဲ လွမ်းတုန်း .. လွမ်းဆဲ .. လွမ်းမြဲ ..
ရေးသားသူ မိုးခါး at 8/13/2012 02:04:00 AM5comments: